Fantsona Gratings - China SNODE Sodina
Valves sy Hydrants
afo Hydrant Castings
Hydrant Casting faritra
Famavanin'ny tanana sy Hydrant boaty
Sakamandimby sy ny Adapters
Manhole mandrakotra sy Grates
Ductile Iron Manhole hita ao
Soil Pipes, Fittings, sakamandimby
Alatsaho Iron Soil Pipes
Alatsaho Iron Soil Sodina Fittings
Roof fantsona ivoahan'ny
Floor fantsona ivoahan'ny
Alatsaho Iron fatana, Fireplaces
Alatsaho Iron fatana
Alatsaho Iron Fireplaces
Thermostatic radiatera Valves
Namboarina Metal Products
Manhole hita ao
Square manhole rakotra tamin'ny 4 elatra
Alatsaho Iron Wood Fireplaces FP20
Non Rising vatan tsy voahozongozona Soft nipetraka Gate Valves BS ...
Product Description 1) Polymeric simenitra dia maharitra fantsona fitaovana avo sy ny hery simika ny fanoherana. Tsy maharitra ela ary manana manisy ratsy ny tontolo iainana, dia mety ho be mpampiasa drainage rafitra. 2) rehetra dia ny fantsona vita amin'ny simenitra polymer, 1000mm ny lavany, ary ny CO (anatiny sakany) dia avy 100mm ny 300mm, manaraka EN1433, mpianatra avy amin'ny A15 ny F900. Momba ny makarakara fitaovana, dia matetika mampiasa ario vy, Stainless vy sy nandrisika vy. 3) Ny javatra iray ny fantsona Allo ...
1) Polymeric simenitra dia maharitra fantsona fitaovana avo sy ny hery simika ny fanoherana. Tsy maharitra ela ary manana manisy ratsy ny tontolo iainana, dia mety ho be mpampiasa drainage rafitra.
2) rehetra dia ny fantsona vita amin'ny simenitra polymer, 1000mm ny lavany, ary ny CO (anatiny sakany) dia avy 100mm ny 300mm, manaraka EN1433, mpianatra avy amin'ny A15 ny F900. Momba ny makarakara fitaovana, dia matetika mampiasa ario vy, Stainless vy sy nandrisika vy.
3) Ny javatra iray ny fantsona mamela ny fampiharana ny hahatratra ny trano fonenana, Commercial, orinasa ny agricultural- Bungalows, condominiums, zaridaina, mpandeha an-tongotra sy ny hazakazaka am-bisikileta faritra, nandroaka lalana, fiara-zaridainam-panjakana, lalana, faritra indostrialy, sns
1) Ny fitaovana dia polymer simenitra, maivana kokoa, tsy matin'ny hatsiaka.
2) Flat faritra ho malamalama-mikoriana ny ranon-javatra, ny fisorohana, tamin'izany andro izany, anaty antsanga na inona na inona ny akora.
3) Polymer mivaingana tsara kokoa dia manana hery harafesiny, simika mpiasa sy ny loadings.
4) Ny polymer mivaingana drainage fantsona 'ny rano ambany hisakana ny fiasan'ireny 0.3%.
5) Hanampy hanatanteraka handcrafts kely indrindra amin'ny tsara araka ny marina.
Previous: Square manhole rakotra tamin'ny 4 elatra
Next: sodina radiators R1
Aluminum Channel makarakara
Aluminum Floor makarakara
Mafy aluminium Strut makarakara
Best Price Hot Dip nandrisika Steel makarakara
Alatsaho Iron Channel makarakara
Floor Channel makarakara
Makarakara Trench Cover
Strut mafy makarakara Channel
Grp Roofing makarakara
Hot Dip nandrisika Steel makarakara
Hot niara-nanatsoboka nandrisika Steel makarakara
Industrial Floor makarakara
Manhole Cover Ary makarakara
Manhole Cover Ary Road Grates
Metal Channel makarakara
Plain Bar Stainless Steel makarakara
Plastic Gratings Channel makarakara
Orana Flow Floor Channel makarakara
Rain Water makarakara
Ranonorana Channel makarakara
Swimming Pool Stainless Steel makarakara
hady kely Grates
Address: Room1211 Zhongyuan Building, Youyi Avaratra Street, Xinhua District, 050061 Shijiazhuang, Hebei, Sina
Casting Parts avy Machine koronosy-dalana, ...